Ukuhlala kwisihloko kwibhlog yakho? Sebenzisa ilifu lethegi yakho ukubona | Martech Zone
Ukuhlala kwisihloko kwibhlog yakho? Sebenzisa ilifu lakho lethegi ukubona
NgoMgqibelo, Septemba 2, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Xa ndindwendwela ezinye iisayithi, kunqabile ukuba ndijonge ilifu labo lethegi. Andiqinisekanga ukuba kutheni, ndicinga ukuba ndihlala ndilapho kuba ndizifumene kukho ireferensi okanye isihloko okanye isihloko sasinomdla kum.
Nangona kunjalo, ndicinga ukuba kubalulekile ukuba iibhlog zinike ingqalelo kwilog yebhlog yabo. Ungalibona ilifu lam lethegi kwibar esecaleni phantsi kwe "Iimpawu". Ndicinga ukuba ndenza umsebenzi olungileyo wokugcina umxholo, ukusukela ekubhekiseni kwam kwilifu ishishini, urhwebo, yaye iteknoloji. Yinyani le bendiyifuna ukugcina umxholo webhlog yam malunga nokuba ndicinga ukuba ndenza umsebenzi olungileyo.
Ilifu lethegi (ngokwesiqhelo laziwa njengoluhlu olunobunzima kwicandelo loyilo olubonakalayo) ngumboniso obonakalayo weethegi zomxholo ezisetyenziswa kwiwebhusayithi. Rhoqo, iithegi ezisetyenziswa rhoqo ziboniswa kwifonti enkulu okanye zigxininiswe ngenye indlela, ngelixa iodolo ebonisiweyo ngokubanzi ingoonobumba. Ke bobabini ukufumana ithegi ngoonobumba kunye nokuthandwa kunokwenzeka. Ukukhetha ithegi enye kwilifu lethegi kuya kukhokelela kuqokelelo lwezinto ezinxulunyaniswa naloo thegi. - Wikipedia
Nika ingqalelo kwilifu lethegi yakho, iya kukubonelela ngolwazi ukuze ubone ukuba awuhlali na kumxholo. Jonga amanye ala mafu ethegi kwaye ubone malunga nokuba ezi ndawo azihlali kumxholo:
Ngaphandle kwam, le yimizekelo yeeblogi eziyimpumelelo kakhulu. Xa uthelekisa ilifu lethegi kunye nenkcazo yebhlog, uyakufumana ulingano olugqibeleleyo phakathi kwabo. Ndicinga ukuba ilifu lakho lethegi aliboneleli ndwendwe ngengqondo yokuba ibhlog yakho imalunga nantoni na, kuya kufuneka ulungelelanise ukugxila kwakho, okanye uhlengahlengise indlela oyichaza ngayo kwaye uyichaze ibhlog yakho.
Ibhlog yam ibhetele kune-99.86% yazo zonke ezinye iiblogi!
Sep 2, 2006 ngo-10:41 PM
Iposti emnandi kakhulu - ukujonga ilifu lam lethegi, yonke into igcwele indawo 😆
Unendawo entle apha Douglas, yigcine njalo!
Nov 14, 2006 ngo-1:32 AM
Ndifike ngandlela thile kwindawo yakho ukusuka ukucofa kwaye masithi eli nqaku beliluncedo kakhulu. Njengeblogi entsha, kunzima ukugcina zonke iingcamango ze-SEO phaya. Enkosi ngokuyidibanisa ibe yifomathi enokugaywa. Ngoku ukuba ndiyakwazi ukubona ukuba ukushiya uluvo nge-URL yam yewebhu kuyafana nomva?
NgoJanuwari 26, 2007 ngo-1:22 PM
Ndongeze ilifu lethegi kule sayithi.
Meyi 28, 2007 kwi-10: 03 PM
Ulwazi oluluncedo kakhulu. Kodwa ngaba iTag Cloud ingasebenza kwindawo ye-arcade?